DAAWO: Puntland “Dilkii Paul Formosa ayaa saameeyay dhismaha Dekedda Boosaaso” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
May 23, 2022 Xuseen 15
Wasiirka Dekeddaha iyo Gaadiidka Badda Puntland, Axmed Yaasiin Saalax ayaa sheegay in muddo bil gudaheed lagu bilaabi doono dayactirka iyo ballaarinta Dekedda Boosaaso.
Wareysi uu siiyay Puntland TV, ayuu ku sheegay Wasiir Axmed Saalax in mashruuca ballaarinta Dekedda laga wareejiyay shirkadda P&O oo qeyb ka ah Shirkadda DP World, taas oo sannadkii 2017kii la wareegtay Dekedda.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa xusay in hadda laga wareejiyay P&O gacan ku heynta mashruuca dekedda, ayna si rasmi ah ula wareegtay shirkadda DP World, kaddib kulan ku dhexmaray magaalada Dubai madaxda shirkadda iyo wafti uu hoggaaminayay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
April, 2017kii, Xukuumaddii Puntland ee uu hoggaaminayay Madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, iyo shirkadda P&O oo qeyb ka ah DP World, ayaa ku kala saxiixday Dubai heshiis soconaya 30 sano, kaas oo dhigayay in horumarinta iyo maalgelinta dekedda Boosaaso.
Heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan $336 million, ayaa lagu go’aamiyay in dhismaha dekadda lagu dhamays tiro mudo 24 bilood gudahood ah oo ka bilaabmaysa maalinta heshiiska la saxiixay, laguna kordhiyo dekedda illaa 450 Mitir oo ballac ah, lana dayactiro qeybta hadda shaqeysa. balse heshiiskan ayaa fashilmay.
Wasiirka Dekeddaha Puntland ayaa tilmaamay in dilkii madaxii P&O ee Dekedda Boosaaso Paul Anthony Formosa, uu ahaa caqabad si weyn u saameysay heshiiska ballaarinta Dekedda, balse hadda la dhameeyay arrimahaas. Waxaana uu intaas ku in dadka degan dhulka Dekeddu ay leedahay laga saari doono dhowaan, si howsha ballaarintu ay si wanaagsan ugu hirgasho.
Qiilkan jaban miyaa maantana loo adeegsanayaa in fashilka Gaas iyo Dani loogu raadgado oo loogu ceeb-asturo? Waa maraanmarsiinyo haddii maxkamad kasta la horgeeyo laad la ladhaci lahaa inta laguqoslo.
Shirkaddu waxay heshiiska qandaraaskaas usaxiixday dowladda iyo shacabka Puntland, waxaana hubaal ah in shirkaddaas qareennadeedu iyo mareeyaha mashruucaba xisaabta ku darsadeen halisyada waajahi karayay maadaama meeshu Soomaaliya tahay (risk assessment).
Su’aasha kamid ah su’aalaha fashilkan dulhoganaya ayaa ah in Gaas iyo Dani kas iyo ogaal usaxiixeen qodobbada halisyadaas taabanaya ee dhigaya in wixii dhacdo khatar ah ee shirkadda iyo shaqaalaheeda kuhabsata ay qaanteedu Puntland ka go’antahay; haddii sidaas sameeyeenna waxa ku kallifay?
Waxaa kale oo in bayaan loocaddeeyo u baahan in heshiiskaas uu kujiro qodob ay Puntland ku dartay ee qeexaya in haddii fal mise falal argaggixiso hawshaas kuhabsadaan aysan Puntland mas’uuliyaddeeda qaadi karin oo lagutirinayo shil kama’ u dhacay.
Arrimahan oo kale ma sahlana oo maxkamad ayaana lagu kala garnaqdaa oo laguna kala baxaa. Dhibta Puntland lahadhay ayaa ah in madaxdeedu kumaamulaan qaab iyo maan kelitalisnimo ee aan daahfurnayn oo Xamarna waxba kaga duwanayn. Saxaafadduna waa mid iska allowsahal ah ee aan dabagallo rasmi ah kusameynin arrimaha xasaasiga ee noocan oo kale ah ee Puntland dhaqaalaheeda iyo tayadeeda nololeedba sida ba’an u galaafta.
Hadal ay madaxweynuhu mise wasiir iska yiri ayaa la iskarumaysanayaa oo sheekadaba lagu xirayaa, sidaasuna ma aha si dowlad-wanaag lagu gaari karo abid.
Hadda hadalkan wasiirku wuxuu lamacne yahay in shirkaddaasu Puntland u ciqaabtay dilkii ninkaas loo geystay oo hawshii ay ballaanqaaddayna kas iyo maag uga baajisay si dekaddu uga curyaanto.
Ma waxaas oo kale ayuu aqbali kari lahaa madaxweyne damiir iyo dareen leh ee ay waddaniyaddiisu caafimaad qabto? Puntland waxaa la degay kuwa madaxda u noqda ee ciidda iyo caadada mooryaaneed kudhashay oo kusoo barbaaray – bal qummaatu ugu fiirsada aafooyinka kasoo gaaray Cadde Muuse, Dani, Gaas, iyo Burhaan.
Nasir Ji says:
Bakh bakh adeer heshiisku sidee ku hirgalaya hadii aan Amni jirin? Soo dadka imanaya mahaa umado aan Somali aheyn oo raba in Mushruuca khibrad ahaan uga qeyb qataan.
Dadka madaxa looga jiro oo internet ka ku soo bandhiga khibrad yaridooda iyo doodaha jaban waxba ma yeeleysan ee intaas garo.
Meel amni ah baa nolol iyo dhisme ka hirgala.
Ninkas Nisa iyo Qatar baa dileey oo ddka shacabka adeegsadey Wana wixii odee,habar iyo caruur tanyadda garaaci jireey oo iminka kala dhuunteey dilkii Paul kadib.
Emirateska majirto sabab ay labo dekadood oo populationka isticmaalayaa saas u kooban yahay ay lacagta intaas le’eg u galisaa, ujeedada waxay ahayd in aan cid kale meesha soo gelin waana ku guulaysatay, xoogaa dhaqaale ahna way ku bixisaa..
Hadana kismaayay la wareegtay maqal dhawaan…
dilka Paul waxa ka danbeeyay Farmaajo iyo qadar iyagoo u adeegsaday reer Bari inan gumreedyo ah iyagoo u heesta in dekada Boosaso uu Maxamud seleybaan leeyahay waxa fiicn in sida lo daayo 10sano markii ay ku xirantana loo wareego dekada Garacad
Guulwade maanka ka curyaaman uma hadal xumid allaylehe. Waa noocaaga kuwa Puntland meelkasta ugu bahdila hawraar aan caqli iyo aqoon toona kusaleysnayd iyo dacaayado rakhiis ah ee aan sal iyo raad toona lahayn oo madaxda fashilmay loogu raadgadayo.
Bal hadda, adigu waxaad umaleysay in haddii aad NISA dilkaas kunisbeyso aad Puntland daafacday, laakiin sixun baad Puntland ugu bahdishay andacoodkaas isaga ah. Sabab?
Sow Puntland NISA iyo Dowladda Federaalka ee dhistayba kama gu’ weyna? Sow waajibku ma ahayn inay Puntland kaga horreyso xirfadaha iyo aqoonta sir-doonnimada iyo sugidda amniga? Sow inta loosoodhacay amnigeeda loogu gacandhaafay Dowladda Puntland kuma noqonayso ceeb iyo nusqaan weyn?
Waa la ogaa in Puntland Xamar duullaan lagaga soo ahaa oo kooxaha argaggixisadana loo adeegsanayo, wuxuuna waajibku ahaa in madaxweynaha Puntland geed dheer iyo mid gaabanba u fuulo in aan Puntland martideeda loosoodhaafin oo laguna waxyeelleyn – maadaama ay sumcadda Puntland kawaanka saarantahay.
Cidkasta oo dilkaas ka dambeysay waxaa eeddeeda iyo ceebteeda toos u xambaarsan ninka madaxweynaha ka ah. Dhibaato kasta oo Puntland kasoo gaadhayna waxaa eeddeeda iyo ceebteedaba toos u xambaarsan ninka madaxweynaha ka ah. Waana qaaciido caadi ka ah bulshooyinka dowlad-wanaagga hantay ee islaxisaabtanka iyo daahfurnaanta kucaanamaalay.
Adigu faan iyo faataabakh ayay kaa ahayd, waxaadse meesha ku kashiftay oo ku bahdishay Puntland iyo sumcaddeeda. Runta haddii aan lasheegin wax kaxun baa lasheegaa.
askarkii bastooladis lagu dilay POUL dekeda ayuu lacg ka qaadanaay naskii hooyadis beey ahayd malitii xabsiga bosaso la soo weerary ayuu baxsaday haday caqli leeyihin wiil konfur ka yimi hormarkooda ma baabiyeen sida somalandi bay dhihi lahaayeen welcomewixii maal kashanaaya ilbaxnimadu cayaar ma’aha toban sano waaba tagtay dheef beey ka heleen cilmi beey ka heleen. puntlandi waa meesha laba madaar oo calamiya leh iyo laba dekedood hadii danimo jirto waxkasta gonda haaga ayeey iman
Oo hadii dp lagu wareejiyay baarlamaanka maan la marin imisa ayay sharing ku yeelanaysaa meeshaba baarlamaan ma jiro
The Carbonaro Effect says:
Hees Wngsn Qaada ..
Imaaraadka awalba dekedda Boosaaso wuxuu ula wareeygay in uu cuuryaamiyo, sida uu u cuuryaamiyey dekedda Calanka ah ee Cadan/Yemen!
Laakiin illaa iyo haddeer waxaan fahmi la’yahay, sababta uu Deni haddana ugu wareejiyey Garoonkii Diyaaradaha ee uu Talyaaniga dhisay?!!!!
Imaaraad wuxuu leeyahay Garoomo iyo Dekedo ka waaweyn oo ka casrisan kuwan uu la wareegayo oo haddana u dhaw. Waxaa kale oo aan ognahay, in uu Dekeddii Berbera si hoose ugu wareejiyey shirkado aay leeyihiin, Yahuud Iyo Ingiriis, Itoobiyana aay cad ku leedahay!
Imaaraad in dekedda Boosaaso lagu Wareejiyo wuxuu ku bixiyey “15 Million” oo laaluush ah oo jeebka shaqsi ku dhacday, lacagtiisiina wuu soo cesheday isagoon hal dhagax ku darin, Haddeerna garoonka Boosaaso ayuu isla waddadii mariyey!
*Dekedda Boosaaso Kacaankii ayaa dhisay.
*Garoonka Boosaaso Talyaani ayaa dhisay.
*Garoonka Garowe iyo Jaamacadda Maakhir Kuweit ayaa dhistey.
Bal inoo sheega wax uu Imaaraadkan ku darsaday Puntland oo aad hadba ugu wareejineeysaan meel aay cid kale dhistey!!!
Majeerteen ayaa Ilbax ah, ha iga harto!
Warnimanyahow khayr sadaliyey oo sheega nacab iyo xasadnah yaraya
Teked dhismeheeda la bilaabayo ma jirto waxba yaan shacabka been berriba soo baxda loo sheegin.
1-Puntland oo la arkay inaanay maamul ahaan u dammaanad qaadi karin amniga,maalgashi shisheeye.
2-Shacab aan u bislayn harumar,maalgashi waxana u daliil ah wuxii buuq ka yimi heshiiska ee ajnebigii hanjabaad xataa AF carbeed ugu diray.
3-Dilkii gudaha tekeda ka dhacay oo tuhunkaas cadeysay.
4-Wixii dhawaan Bosaso ka dhacay.
5-Tekeda Garacad iyana waa caqabad heshiiska ah.
Hada oo nidaamkii Xamar is bedelay Rooblena kulamadiisa u dambeyay ee Imaratka uu Puntland ka weecin karo maalgashiga asbaabo la fahmi karo oo HOBYO ah.
Awal hadalkaagu cidna wax ku yeelimayside aakhiradaada ha iska xumay ayaan ku oranlahaa
Nin runta iyo xaqa difaacaya aakhiradiisu way u sugantahay e armay taadu halis kujirtaa maadaama aad runta iyo xaqa dadayso oo dulmigana taageerayso?